विशेष प्रदेश नम्बर ७ : बैतडीमै खुम्च्यो राप्रपा
Ujyaalo बुधवार, मंसिर ६, २०७४ २०:५४:००
बैतडी, मंसिर ६ – राप्रपाले प्रदेश नम्बर ७ बाट प्रत्यक्षतर्फ एकजना मात्रै उम्मेदवार उठाएको छ । प्रदेश नम्बर ७ को बैतडीमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट प्रदेशसभाका लागि राप्रपाका गणेशबहादुर चन्दले टिकट पाउनुभएको हो ।
बैतडीमा प्रदेशतर्फको ‘ख’ मा प्रत्यक्षतर्फ राप्रपाका गणेशबहादुर चन्द एक्ला उम्मेदवार हुनुहुन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं राप्रपाका संस्थापक नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दको गृहजिल्लामा पनि राप्रपाका तर्फबाट एकजना मात्रै उम्मेदवार उठाइएको छ । प्रदेशका अन्य जिल्लामा मनोनयनका दिन राप्रपाका नेताहरुले उम्मेदवारी दिए पनि अन्तिममा कांग्रेसलाई सर्मथन गर्दै उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन ।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक तर्फमा राप्रपाका महामन्त्री एवं आपूर्ति मन्त्री जयन्तबहादुर चन्द बैतडीबाट उम्मेदवार बन्नुभएको छ । आपूर्ति मन्त्री तथा राप्रपा महामन्त्री जयन्तबहादुर चन्दले लोकतान्त्रिक गठबन्धन जिताउनुको विकल्प नरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मात्रै सबै नागरिकको अधिकार सुनिश्चित हुने बताउनुभयो । लोकतन्त्रमा मात्रै जनता स्वतन्त्र भएर हिँड्न सक्ने भएकाले लोकतन्त्रको रक्षा गर्न लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन आग्रह गर्नुभयो । वाम शक्तिहरुले देशमा कम्युनिष्ट अधिनायकवाद लाद्न खोजेको आरोप लगाउँदै मन्त्री चन्दले स्वतन्त्रता वा अधिनायकवाद के रोज्ने जनताको हातमा रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य हेमबाबु लेखकले प्रदेश नंं. ७ को बैतडीमा मात्रै पार्टीले गठबन्धनबाट उम्मेदवारी पाएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश नंं. ७ मा लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने बताउँदै समानुपातिकमा भने पार्टीका आफ्नै उम्मेदवार रहेको बताउनुभयो । केन्द्रीय सदस्य लेखकले लोकतन्त्र रक्षाका लागि सबै प्रजातान्त्रिक शक्ति एक हुनुपर्ने भन्दै प्रदेश नं. ७ का सबै जिल्लामा राप्रपाको संगठन हुँदा पनि उम्मेदवारी नदिएको बताउनुभयो । यहाँका अन्य जिल्लाका तुलनामा राप्रपा बैतडीमा राम्रो संगठन भएको पार्टी हो ।
राप्रपाबाट यहाँका एक्ला उम्मेदवार रहेका बैतडी प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार गणेशबहादुर चन्दले चुनावका बेला घरदैलोमा जाँदा उत्साहित भएको बताउनुभयो । उहाँले पेशागत क्षेत्रमा चुनाव लडेको अनुभव रहे पनि राजनीतिमा पहिलो पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको बताउनुभयो । जनचाहनाबारे आफू निकै नजिकबाट जानकार रहेको बताउँदै उहाँले आफ््नो प्रदेशसभाको क्षेत्रमा पार्टीको संगठन सवल रहेकाले पनि नतिजा आफ्नो पक्षमा आउनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । उहाँले देशकै पहिलो पार्टी नेपाली कांग्रेसको समेत साथ रहेकाले जित सहज रहेको दाबी गर्नुभयो ।
बैतडीमा पहिलो चरणअन्तर्गत यही मंसिर १० गते चुनाव हुँदैछ । प्रतिनिधिसभाको लागि एक र प्रदेशसभा सदस्यका लागि २ निर्वाचन क्षेत्र रहेको बैतडीमा १२ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन ।
बैतडीमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि कांग्रेस नेता तथा बाणिज्य राज्यमन्त्री नरबहादुर चन्द उम्मेदवार बन्नुभएको छ । प्रदेशसभा सदस्यको लागि बैतडी ‘क’ बाट नेपाली कांग्रेसका हरिमोहन भण्डारी र बैतडी ‘ख’ मा राप्रपाका गणेशबहादुर चन्द चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन ।
वामगठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाको लागि एमालेका नेता पूर्व अर्थराज्यमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई अघि सारेको छ । प्रदेशसभाको लागि ‘क’ बाट माओवादी केन्द्रका प्रेमप्रकाश भट्ट र ‘ख’ बाट एमालेका लिलाधर भट्ट उम्मेदवार बनेका छन ।
यस्तै प्रतिनिधिसभाका लागि विवेकशील साझाबाट नारायणदत्त अवस्थी , एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादीवाट त्रिलोकबहादुर चन्द र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट विरेन्द्र सिंह भण्डारी चुनावी मैदानमा लड्ने भएका छन् । प्रदेशसभा तर्फ क्षेत्र नम्बर १ राष्ट्रिय जनसमाजवादी पार्टीबाट भगीरथसिंह कुवर,राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट अर्जुनसिंह मडै र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालबाट दिलिपराज पाण्डे चुनावी मैदानमा रहेका छन् ।